Kedu ihe kpatara azụmahịa gị ga-eji gaa mmekọrịta mmadụ na ibe | Martech Zone
Ihe kpatara azụmahịa gị ga-eji gaa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Tuesday, July 3, 2012 Thursday, June 18, 2015 Andrew K Kirk
Ọ bụghị ihe nzuzo na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze dị ebe niile. Anyị na-ahụ akara ngosi Twitter na Facebook maara nke ọma na ntanetị anyị na ozi ịntanetị anyị. Anyị na-agụ banyere ya n'ịntanetị na n'akwụkwọ akụkọ.
N'adịghị ka ụdị ahịa ndị ọzọ dị iche iche, ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere ike ịnweta ndị nwe obere azụmaahịa dịka ọ dị Companieslọ ọrụ Fortune 500. Ndị folks na Wix etinyela ihe omuma ihe omuma nke na egosi ihe mgbasa ozi ndi mmadu na ahia gi. Lee ihe ndị a:
80% nke ndị America ma ọ bụ nde mmadụ 245 na-eji mgbazinye otu netwọkụ mmekọrịta. Tweet a
53% nke ndị na-arụ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta na-eso opekata mpe otu akara. Tweet a
48% nke obere azụmaahịa na ndị ọchụnta ego kwalitere ahịa site na iji mgbasa ozi mmekọrịta. Tweet a
58% nke obere azụmaahịa belatara ọnụ ahịa azụmaahịa site na iji mgbasa ozi mmekọrịta. Tweet a
Ndị ọrụ Facebook na-ekerịta ijeri ihe 4 kwa ụbọchị. Tweet a
Tags: Facebookinfographicahịa mmadụSocial Media Marketingya meregịnị kpatara mmadụgịnị kpatara mmadụ ịzụ ahịagịnị kpatara mmadụ mgbasa ozigịnị kpatara mmadụ mgbasa ozi ahịakedu ihe kpatara azụmahịa gị ga-eji bụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe yaihe kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji bụrụ nke mmadụwix
Andrew K Kirk bụ onye guzobere Face The Buzz, nke na-enyere obere ndị nwe azụmaahịa aka ijikwa ike nke ịre ahịa n'ịntanetị. Ndị ahịa ya ugbu a bulitere ihe karịrị $ 3.5 nde na ego. Ọ na-enye ọnụọgụ ole na ole nyocha ntanetị n'ịntanetị n'efu.
White Hat Monsters nke SEO
Na-adịghị mma: Tragbọ okporo ụzọ na Aro Aro
Jul 3, 2012 na 6:26 PM
Ekele dịrị ndị ahịa Marketing Tech Blog niile; ọ 'a gbawara na-arụ ọrụ na unu niile. Na-atụ anya ọtụtụ posts ndị ọzọ.
Jul 3, 2012 na 6:34 PM
Nnukwu infograph. Ofdị ya masịrị m. Jide ọrụ ọma ahụ.
Jul 3, 2012 na 10:06 PM
@nelsonta: disqus, Daalụ maka okwu ọma!
Blog nke Venturalist
Jul 3, 2012 na 6:48 PM
Chaị. Mgbasa mgbasa ozi na-eto kwa ụbọchị. M na-eche ma ọ bụrụ na uto afụ ga-agbawa.
Jul 3, 2012 na 10:08 PM
@ twitter-100637060: disqus, i welitere ezigbo okwu nkata. Agbanyeghị, echeghị m na ọ bụ ọ bụrụ, mana oge. All oké teknụzụ na ọnọdụ na-karịrị site ọzọ "ọhụrụ na kasị ukwuu". Ajụjụ bụ mgbe ọ ga-eme?
Jul 3, 2012 na 8:13 PM
Enweghị m ike ikwenye na gị karịa na infographic a na ihe kpatara azụmaahịa ga-eji na-elekọta mmadụ. Ọ bụghị naanị ihe na-aga n'ihu. Social media bụ ebe a na-anọ. Ewezuga ohere iji soro ndị na-ege ntị buru ibu, ọ na-enye ụzọ ọzọ dị ọnụ ala na mmemme ahịa ahịa ọdịnala.
Jul 3, 2012 na 10:11 PM
@ twitter-302771660: disqus Daalụ maka okwu gị na ịnụ ọkụ n'obi gị! Bụ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala na azụmaahịa ọdịnala na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụrụ mpaghara ọhụụ ọhụụ na ahịa. N'ebe gara aga ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọkachasị obere azụmaahịa, agaraghị etinye aka na TV ma ọ bụ mgbasa ozi redio, mgbasa ozi mmekọrịta na blọọgụ bụ ebe egwuregwu na-emeghe.
Aug 1, 2012 na 8:31 PM
Ndewonu Andrew! Bụ eziokwu!
Social media nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye. Mara usoro ma gaa n'ihu itinye aka na ịkwanye mmasị iji ruo nsonaazụ ezubere gị. A na-akwụ ụgwọ niile maka mbọ n’oge. Nwee ndidi 🙂
Aug 1, 2012 na 8:47 PM
Right na na na!